image from world dental.org
ဒီနေ့ည၀င်လာတဲ့ Bristish Dental Journal ကအီးမေးလ်ထဲက လူထုအတွက်အရေးကြီးတဲ့သုတေသနစာတမ်းတစ်စောင်တွေ့လိုက်ရလို့ အိပ်ချင်ချင်နဲ့ဘဲရေးလိုက်ရပါတယ်။
ခံတွင်းသန့်စေတယ်ဆိုတဲ့ငုံဆေးတွေအမျိုးမျိုးဈေးကွက်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာထဲကပေါ်ထွက်နေခဲ့ကြပြီး၊ သွားပိုးစားရောဂါ၊ သွားဖုံးရောဂါတွေကာကွယ်ရာမှာထိရောက်တဲ့ ကုသမှုအကူပစ္စည်း (Adjunct to dental treatment) အနေနဲ့သုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်လည်းထိရောက်ပြီး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့သုတေသနတွေအရ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သွားဆရာဝန်တွေဟာ၊ သွားဖုံးရောဂါရှိသူလူနာ၊ သွားခံတွင်းခွဲစိတ်ကုသမှုပြုထားခါစလူနာ၊ သွားတိုက်ခြင်းစတဲ့သွားခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးသေချာလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူနာတချို့ကို သုံးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ဖူး၊ တိုက်တွန်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလထုတ် BDJ ကစာတမ်းအရ၊ ဒီလိုညွှန်းနေကြတာကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်အစမှာဖော်ပြထားတဲ့ သုတေသနစာတမ်းအရ၊ အရက်ပျံပါတဲ့ငုံဆေးတွေဟာ ဆိုးဝါးလှတဲ့ ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါအထိဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေသလားဆိုတာ တခြားသုတေသနနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးသုံးသပ်ထားပါတယ်။ ငုံဆေးတိုင်းမဟုတ်ပေမယ့် ဈေးကွက်ထဲမှာနာမည်ရနေတဲ့လူသိများတဲ့ Listerine လိုငုံဆေးအပါအ၀င်တော်တော်များများမှာ အရက်ပျံဓာတ် ethanol ပါဝင်ဖော်စပ်ထားပြီး ၂၆%ထိတောင်ပါတဲ့ငုံဆေးတွေရှိပါတယ်။ ethanol ဟာထုတ်လုပ်ရလွယ်ကူပြီးဈေးသက်သာတာ၊ တခြားဓာတုဓာတ်တွေပျော်ဝင်မှုကိုအားပေးပြီး၊ ဆေးအာနိသင်ထိန်းသိမ်းပေးတာရော၊ ပိုးသေစေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့ပါထည့်သွင်းဖော်စပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအရက်ပျံဓာတ်ကြောင့် ငုံဆေးပုံမှန်အမြဲသုံးတတ်သူတွေမှာ မသုံးတဲ့သူတွေထက် ခံတွင်းကင်ဆာပိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့သုတေသနတွေ့ရှိချက်တချို့ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အရက်သောက်တဲ့သူတွေမှာ ခံတွင်းကင်ဆာနဲ့အစာရေမျိုပြွန်ကင်ဆာအဖြစ်များပြီး၊ အရက်ဟာခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေထဲကတခုဆိုတာ အရင်ကတည်းကတွေ့ရှိထားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘ၀ကတော့ အရက်ပျံဓာတ်ပါတဲ့ငုံဆေးတွေရော၊ မပါတဲ့ငုံဆေးတွေပါ ကုသမှုအကူဆေးအနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်မရှိသုံးနိုင်တယ်ဆိုတာသင်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငုံဆေးသုံးတာတခုတည်းနဲ့ သွားတိုက်တာ၊ သွားကြားကြိုးနဲ့သန့်ရှင်းတာစတဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရမယ့် ကျန်းမာရေးအလုပ်တွေကို အစားမထိုးနိုင်ဘူးဆိုတာ၊ အထူးအလေးပေးသင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းလည်းလူနာတွေကို ပြန်ပညာပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီစာတမ်းကရည်ညွှန်းထားတဲ့သုတေသနတခုအရ အရက်ပျံပါတဲ့ငုံဆေးရည်ကို တနေ့နှစ်ကြိမ်ထပ်ပိုပြီးသုံးတဲ့ သူတွေမှာ လုံးဝမသုံးသူတွေထက် ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေး ၆ဆပိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ထပ်သုတေသနတခုအရ အသက်၂၀မတိုင်မီကတည်းကအရက်ပျံပါတဲ့ ငုံဆေးကိုပုံမှန်သုံးလာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ မသုံးသူတွေထက် ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်ဖို့ ၂.၃ဆပိုများတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။
အရက်ပျံပါတဲ့ငုံဆေးတွေဟာ၊ ခံတွင်းကင်ဆာအပြင်၊ ခံတွင်းခြောက်ကပ်စေခြင်း၊ ခံတွင်းသားများနာစေ၊ လောင်စေခြင်း၊ တချို့သွားဖာထားရတဲ့နေရာတွေပျော့လာစေခြင်းစတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီပို့စ်ကိုဖတ်မိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ခံတွင်းသန့်ဆေး ငုံဆေးတွေပုံမှန်သုံးနေခဲ့ကြရင်၊ ငုံဆေးထဲမှာ အရက်ပျံပါမပါစစ်ကြည့်ဖို့နဲ့၊ အရက်ပျံ ethanol ပါဝင်နေရင် ချက်ချင်းမသုံးတော့ဘဲ ရပ်လိုက်ဖို့ အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
(Oral-B, Colgate နဲ့ Chlorhexidine ငုံဆေးတွေမှာ ethanol မပါဝင်ပါဘူး။ Listerine ကတော့ ethanol-free ငုံဆေးကိုထုတ်နေပြီလို့ကြားရပါတယ်)
Posted by Dr. Nyan at 9:33 PM
ဗဟုသုတ လည်း ရသွားပါတယ် ..
အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ ဗဟုသုတ (Information) ပါပဲ။
Thank you very much for your precious information. We and my husband are used to be mouth wash at least two times per day. Recently we used3types of mouth wash. Pearlie White (Alcohol Free), Listerine Original and Guardian Brand.
In there, Pearlie White is Alcohol Free, so I think can use safely.
Guardian Brand mention the ingredients of “Ethanol”. So I aldy decided to throw away and not to use this one.
But when I checked the one recently I using the Listerine Original, saw that Alcohol (26.9%) as ingredient. This ingredient is same with “Ethanol” as you mention? If it is Yes, sure I won’t use this one also any more. (Sad that I just bought the new bottle of 750ml last three days. :D )
To Ma TZ, unfortunately, Alcohol is the same as ethyl alcohol or ethanol. Alcohol percentage of most beers is 6-8%. That of Rum is 37.5%–75.5% and Whisky being 40%–55% (usually 40% or 43%). Usually these are mixed with soda or water before drinking. Taking this, we would say exposure to strong alcohol from this listerine with 26.9% gargle two timesaday is equal to or probably exceeded than frequent social drinkers who may not drink every day. Instead of throwing away, you can use it to disinfect some table surfaces or toilet cleaning.
Another option is to use it asaantiseptic solution to clean your tooth brushes. It is important to clean tooth brushes with antiseptics timely. I will post about this soon.
Thank you very much again for your detail explanation. Appreciate it. Your posts are really valuable for the people who like us to take care of health.
Thank you Dr, nyan,
I will read it again later. I came from wesheme blog.
Thank you, Ma TZ.
It is my great pleasure if my blog contribution would be at leastasmall candle in lighting the public health field.
ကျမက CURASEPT, CANDIDA, COLGATE ၃မျိုးလုံးကို တလှည့်စီ သုံးနေတာ။
Dr Nyan ရှင့်
menthol ပါတဲ့ပူရှိန်းတွေ ပီကေတွေရော ဆိုးကျိုးရှိပါသလား။
တချို့ပြောကြတာတော့ menthol ပါတဲ့ပူရှိန်းတွေ ပီကေတွေ ကြာရှည် စွဲစားရင် မိန်းကလေးတွေ ကလေးမရတတ်ဘူးလို့ ပြောတတ်ကြလို့ပါ။ ကျေးဇူးပါ
အမ.သမီးတို့နဲ အတူ ပျော်ရွှင် ပါစေ
menthol ကဆေးဘက်ဝင်ဓာတ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပီကေတွေမှာပါတဲ့ပမာဏကြောင့် ဘေးဖြစ်စေတယ်လို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ menthol စီးကရက်တွေသောက်
လို့အမျိုးသားတွေမျိုးမအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာ mentholကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စီးကရက်ထဲက tobacco ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သုတေသနတွေအရသိရပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Shwe ရေ...